Ny fibre Carbon tsara indrindra dia nahatsapa mpanamboatra lamba firakotra vita amin'ny Carbon sy orinasa | Wanhoo
Lamba firakotra fibre karbonina
Ny lamba firakotra dia fitaovana fiarovana natao hamonoana ny afo tsy miova (manomboka). Izy io dia mirakitra ravin-dabilio iray apetraka amin'ny afo mba hamonoana azy.
Lamba firakotra kely, toy ny ampiasaina any an-dakozia sy manodidina ny trano dia matetika vita amin'ny fibre vera, fibre carbon ary indraindray kevlar, ary aforitra ao anaty fonosana famoahana haingana mba hahamora ny fitahirizana.
Akanjo fandoroana afo, miaraka amin'ireo fitaovana famonoana afo, dia fitaovana fiarovana afo izay mety ilaina raha sendra afo. Ireto bodofotsy tsy mirehitra ireto dia manampy amin'ny maripana hatramin'ny 900 degre ary ilaina amin'ny famonoana afo amin'ny alàlan'ny tsy famelana oksizena ho may. Noho ny fahatsorany, ny lamba firakotra dia mety hanampy bebe kokoa ho an'ny olona iray izay tsy manana traikefa amin'ny famonoana afo.
Carbon nahatsapa dia novokarin'ny carbonization ny voajanahary sy ny sentetika kofehy. Izy io dia manana toetra mafana sy simika tena tsara, fantatra ihany koa amin'ny fahatsapana akrilika alohan'ny oxidized.
Carbon Fiber nahatsapa dia maivana sy malefaka tokoa.
Ny fitarihana hafanana ambany dia 0.13 W / mk (amin'ny 1500 ℃)
Fahombiazana lehibe kokoa amin'ny fanafanana sy ny fampangatsiahana
Fanoherana ny hafanan'ny 1800 ° F (982 ℃)
Mora ny manapaka sy mametraka
tsy mora mirehitra / tsy simba
Ho an'ny gazy sy ranoka mafana sy / na manimba
Tsy hanaisotra na hihena. Tsy handatsaka na hitsonika toy ny fiberglass
Ankoatry ny fanoherana ny hafanana avo lenta dia mora manapaka ny fibre karbonika ary azo oharina amin'ny fiolahana sarotra
Mampiasa fibre carbonized mahazaka hafanana manokana toy ny akora, vita amin'ny teknolojia TSY MISY HORONANA manamboatra lamba tsy voatenona tsy mahatohitra afo. Karazana samihafa arakaraka ny filan'ny mpanjifa, amin'ny lamba firakotra, fantsona, fantsona mafana sy fantsona, lamba firakotra, fitaovana fanamainana miaro amin'ny lelafo, tsihy mahazaka hafanana, fiarovana afo, sns.
Izy io dia afaka manome fiarovana arovana amin'ny maripana avo sy ny spark. Izy io dia be mpampiasa amin'ny insulate thermal sy ny fireproof coating ny fantsona manan-danja toy ny Fire Protection Engineering, Petrochemical Plant ary Steelmaking Plant. Izy io dia fitaovana insulation hafanana tena tsara.
Araka ny toetra mampiavaka ny fitaovana dia afaka manohitra ny maripana hatramin'ny 1200 ° C izy. Izy io koa dia azo ampiarahina amin'ny akora samihafa mitambatra mba hahatratrarana tanjona tsy tantera-drano, tsy hamandoana, tsy misy fibre ary tsy misy vovoka. Fitaovana miavaka izy io miaraka amina tombony maro tsy misy may, tsy misy toetra mampitsonika, tsy misy gazy poizina misy poizina vokarina mandritra ny fandoroana olona, ​​tsy misy fandotoana faharoa.
Teo aloha: Fanamafisana plastika fibre karbaona voatetika
Manaraka: Carbon Fiber Cylinder-Hydrogen Energy